Samsun-Krasnodar Duulimaadyadeed Diyaarinaysa Bandhigyo | RayHaber | raillynews
HometareenkaGaadiidka Samsun-Krasnodar Sameeynta Ciyaaraha
09 / 02 / 2018 tareenka, GUUD, TURKEY
TÜ Samsun EV'leniyoruz 2018, 2. Waxaa diyaariyey TÜYAP iyadoo la kaashanayo taageerada iyo iskaashiga shirkadda Samsun, Dawlada Hoose ee Samsun, Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha, Shirkadda Samsun Badeecadaha, Samsun Rugcadayaasha Farshaxanimada iyo Farshaxanka, Jaamacadda Ondokuz Mayıs iyo KOSGEB. Diyaargarowga guurka, Mashaariicda Guryeynta, Qalabka, Alaabada, Qurxinta, Glassware, Dharka Arooska, Arooska, Dharka Fiidka, Dowry, rooga, Ururka Arooska, Alaabada Caddaan, Carwada Korontada ee açıl ayaa lagu furay xaflad lagu qabtay TÜYAP Samsun Fair iyo Xarunta Kongareeska.
MAGACA KAYMAK: “15 1 QARAXII KHUDBADDII LACAG LA'AAN EE MAALINTA GÜN
15 Samsun Samsun carwo xalaal ah, xitaa fikradda ah inay siiso farxad ayaa ku nuuxnuuxsatay fikradda gudoomiyaha gobolka Samsun Cusmaan Kaymak khudbadiisa xaflada, “Samsun maalin walba way kordheysaa. Dhismaha aaggan caddaaladda ah ayaa ah tallaabo weyn oo shirkadda Samsun ka dhigtay mid ballaaran. Waxaan ubaahanahay inaan sii horumarino carwooyinkaan. Fikradda bandhig ganacsi ayaa runtii xiiso badan. Carwadu waa qayb joogto ah oo ka mid ah dalxiiska iyo dhaqaalaha. Carwooyinka aan ka fureynay Samsun ma ahan oo keliya Samsun kaliya laakiin sidoo kale waxay ka geystaan ​​gobolkayaga. Samsun waxay ahaan jirtay magaalo cadaalad ah. Waxaan u malaynayaa in Samsun ay ku noqonayso aqoonsigeedii hore. Samsun, magaalada isboortiga, magaalada caafimaadka, waxaan ka codsanaa magaalada beeraha. Carwadu waxay saameyn weyn ku leeyihiin dhiirrigelinta Samsun. Samsunspor sidoo kale waa qayb muhiim ka ah kor u qaadida Samsun. Ururka 'TUYAP Fair Organisation', Samsunspor wuxuu ka fureystay qol isagoo matalaya taageerada ay muujiyeen. Waxsoosaarka Samsunspor ayaa sidoo kale lagu iibin doonaa halkan. Waxaan rajeyneynaa Samsunspor, ka hor dhibaatooyinka ay midba ku soo baxeyso. Waxaan ku faan nahay inaan ku dadaalno sidii aan u baabi'in laheyn dhibaatooyinkaas. Waxaan rajeynayaa in cadaaladdeena ay wax ku soo kordhin doonto dhaqaalaheena. ”
MADAXWEYNE YILMAZ: “SAMSUN-KRASNODAR DUGSIYADA DIIWAANKA EE MUXUU KA SAMEEYAA”
Duqa degmada Samsun ee Dawlada Hoose Yuusuf Ziya Yılmaz ayaa hoosta ka xariiqay in bilawga duulimaadyada u dhexeeya Samsun iyo Krasnodar ay sii kordhin doonaan ganacsiga., Waxaan u haynaa talaabo yar oo aan ku qaadno hanaanka cadaaladda. Talaabadan, waxaan u rogi karnaa cadaaladdeena cadaalad ay raacaan dooxada Badda Madoow. Waxaan ku siin karnaa aqoonsi duullimaadyada ka yimaada Krasnodar ilaa Samsun. Haddii aan qorsheyn lahayn duullimaadyo qorsheysan oo udhaxeeya Krasnodar iyo Samsun ugu yaraan 2 maalmood usbuucii, waxaan lahaan laheyn martida Russia, Georgia iyo Ukraine. Waxay sidoo kale gacan ka geysan doonaan dadaalkeena. Ugudambeyntii, asxaabteena sidoo kale waxay aadi jireen carwooyin. Kuma kobcin karno ganacsi dhaqaala yar oo inaga dhex jira. Si loo ballaariyo ganacsiga, waa inaan furno suuq ballaadhan oo ka baxsan suuqkeenna yar. Suuqaani sidoo kale waa magaalooyinka ku yaal xeebta ka soo horjeedda oo masaafad duulimaad u jirta masaafad yar. Waxaan ka helay macluumaad ku saabsan duullimaadyada asxaabta la xiriirta. Duulista ayaa loo qorsheeyay dhammaadka Febraayo. Si kastaba ha noqotee, dhinaca Krasnodar dhibaatooyin ayaa ka jira caadooyinka iyo booliska. Adeeg la'aan booliis ayaa ka jirta madaarka Krasnodar oo ka baxsan Rusline Airline. Waxaa ku jira dowladda Ruushka. Gudoomiyaha Krasnodar ayaa isna xiiseynaya. Marka dhibaatooyinkaas la xalliyo, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan sameysanno duulimaadkii ugu horreeyay. Kadib markay duulimaadyadan bilaabeen, waxaan qorshaynaynaa inaanu kordhinno tirada duullimaadyada maalmaha caddaaladda ah oo aan ballaadhinno ganacsiga. ”
MURZİOĞLU: LA WAA INAAN KU SAMEEYSAA SHAQO Wanaagsan AYAAN KU SAABSAN YAHAY XARUNTA FAIRKA ”
Salih Zeki Murzioğlu, Gudoomiyaha Gudiga Agaasimeyaasha Ganacsiga iyo Warshadaha Samsun ayaa yiri: "Qeybta cadaaladdu waa mid soo kordheysa oo aad u horumarsan maanta. Maanta, carwooyinka waxaa loo abaabulay oo keliya maaha Istanbul iyo Izmir, laakiin sidoo kale qaybo badan oo Anatolia ah. Bandhigyadan ayaa lagu qabtay Samsun dhawr sano. Waxaan arki karnaa taas markii aan furnay carwadaan waxaan qabanay shaqo aad u wanaagsan. Waxaan ku faan nahay in aan cadaalad noocan oo kale ah ula wadaageyno jaalayaasheena magaaladayada. 2 Bisha 15 waxaan yeelan doonnaa caddaalad maalin kasta. Carwooyinka magaalada ayaa ka qayb qaata dhaqaalaha magaaladaas. Waxaan rajeynayaa in carwadaani wax ku soo kordhin doonto dhaqaalaha. Guurku waa muqadas bulshada oo dhan. Waxaan guurka ku arki karno waa shaqada aan arki doonno sida ugu dhaqsaha badan. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo cid kasta oo gacan ka gaysatay abaabulka carwadan ”.
TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş wuxuu cadeeyay in carwada ay fursad weyn u tahay lamaanayaasha is guursanaya, dib u cusboonaysiiyaan waxyaabaha ay leeyihiin iyo inay iibsadaan guri. Maamulaha guud Cihat Alagöz ayaa yiri, “Carwadaan waxaa lagu qaban doonaa Samsun 2. Markaad diyaarsato. Carwadan ayaa kor u kacday 17 marka loo eego tirada soo bandhigeyaasha marka loo eego cadaaladdii aan abaabulnay sanadkii ugu horreeyay. Marka la eego aagga istaagga oo ay kujiraan soo bandhigayaashu, waxaan gaarnay koritaanka 35. Xaallado la mid ah ayaa ka jira furitaan ganacsi oo furan oo ku yaal Samsun. Bandhig ganacsi kasta wuxuu u dhacayaa si weyn sanadka soo socda. Markay caruurteenu sii koraan, hamigeena ah inaan biyo ku darsano dhaqaalaha Samsun ayaa kordhaya. Waxaan abaabuli doonnaa Buugga Bandhigga, wiiggii 10 toddobaad ka dib Carwada Bandhiga iyo 2 usbuuc ka dib Carwada Bandhiga. 2 wuxuu ku soo bandhigi doonaa 2 Samsun. Tallaabada xigta ee Samsun ma aha oo kaliya in Turkey, waxaan noqon doonaa in go'aan si ay u sameeyaan magaalo leeyihiin min cadaalad ah oo adduunka ah, "ayuu yiri.
2 leh marin bilaash ah. Ev'leniyoruz Fair, 8-10 inta u dhaxaysa Feebarwari 10.00-20.00, 11 Febraayo waxaa la booqan doonaa inta u dhaxaysa saacadaha 10.00-19.00.
Gawaarida guurka iyo dharka, shirkadaha ururka, hudheellada iyo maqaayadaha, hoolka arooska, istuudiyaha sawirrada, shirkadaha guryaha lagu iibiyo, dharka dharka, maacuunta, qalabka caddaanka ah, qalabka quraaradda, qalabka jikada, rooga iyo waxyaabaha qurxinta, ubaxleyda, timo qurxinta iyo qurxinta carwada 'EV'leniyoruz Fair' hoolalka, waxyaabaha hadiyadaha, dahabka iyo waxyaalaha laysku qurxiyo.
Duulimaadyada diyaaradaha ee Samsun-Krasnodar ayaa bilowday
Dhibbanaha Tareenka ee Ruushka ee Tareenka Tareenka ee Krasnodar
SOLOTÜRK Duulimaadyada Duulimaadyada Joojiya Neefsashada Samsun
Turkel Fairs Inc.
Turkel Fairs Inc. 1993 ilaa hadda
Türkel Fuarcılık Gudoomiyaha Golaha Fulinta / Maamulaha Bülent ERTEN Eurasia Rail Railway Fair…
Madaxa Mashruuca Morel REVAH, T Fairrkel Fair Organisation '
Samsun Union of Chamber of Tradesmen iyo saanqayrta
Samsun Badeecada Badeecada
Samsun Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha
Duulimaadyada Samsun - Krasnodar
Ogeysiiska Qaadashada: Soo iibsiga Adeegga Gaadiidka Tababarka
Adeega Feejignaanta leh ee Isbitaalka Samulaş